Frankofonia: Mihatsara tahaka ny divay antitra ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2010 22:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Nitamberina somary nalaza kely tanatin'ny ora tsy nampoizina ny hash tag, #jesuisvieux, ao anatin'ny valan-tserasera mpiteny frantsay. Hatramin'ny faha-26 Jolay dia somary nitodika tany amin'ny fahatsiarovana ny mpampiasa twitter, mamoaka ny tsiahiny fahatanora miampy ny hash tag #jesuisvieux ( Antitra aho ity – lehilahy) na #jesuisvieille ( Antitra aho ity – vehivavy). Ahitana fitantarana mampihomehy ny eny an-tsefatsefan'ny fanarahana ity hashtag ity, indraindray koa ahitana tranga mahafinaritra ka ahitana ny fivoaran'ny fampiasana ny haitaon'ny fifandraisana.
Tsy dia mazava loatra aloha raha noho ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny New York Times tamin'ny 15 Jolay mitondra ny lohateny hoe: “Miha-antitra amim-pahasoavana, talenta frantsay” no nahatonga ny fironana tao amin'ny twitter ity fa mibahana ao an-tsain'ny mponina mpiteny frantsay tokoa angamba ity resaka “miha-antitra” ity ka resahiny malalaka.
Nisy ny gazety vitsivitsy no nanangona sy nanadio ny sasantsasany tamin'ny resaka momba izany. Ity misy lahatsoratr'i Coline Bérard ao amin'ny L'Express.fr: “Twitter c'est pour les vieux”, (Ho an'ny antitra ny twitter) sy ny gazety Belza Le Soir izay mamoaka sy manaraka lireo famahanana bolongana eo noho eo momba ny hashtag #Jesuisvieux eo amin'ny sehatra an-tserasera iray.
dikantsary tamin'ny efijery misahana ny tag #Jesuistropvieux ao amin'ny Trendsmap.com
Raha ny notaterin'ny Hashtags.org, dia nahasahana ny 0.03% amin'ny sioka maneratany ny hash tag #jesuisvieux hash tamin'ny 27 Jolay.
Indreto ary nisy sioka vitsivitsy izay nanintona anay:
Avy @JocelyneRobert any Montréal, Canada:
Tsy ny aretina azo avy amin'ny firaisam-batana no mety hanimba ny herim-pilantsika fa ny tahotra ny helo
Nivoivoy teto amin'ny aterineto aho amin'ny fampiasana Netscape
Anna Gueye avy any Senegal sy La Haye Holandy:
Nisy kilasy voalohany tamin'ny metro
slim404 any Tonizia:
Faly aho tamin'ny 7 Nov 7 1987, Hoy ny raiko tamiko:” Tsy mianatra androany, tsy fantatra izay hitranga any.
Nahita Minisitra namatre-pialana aho rehefa noampangaina ho tafiditra amin'ny raharaha maizina izy ireny
Tamin'izaho latsa-pitiavana tamin'ny Kapiteny Harlocke! http://youtu.be/SpE9Yo9dmIo
Tsaroako aho nahita ny kintana manandrambon'i Halley
Tamin'ny fahatanorako tsy mba nisy ny aterineto hahafahan'olo-tsy fantatra tsy manana fiainana manoratra ny fankahalany sy ny fanivaivany ny hafa
Ny nangalatra kapila no nisy fahasahiana kokoa noho ny misintona hira an-tserasera tsy nahazoana alalana
Efa nanao asam-panontana ho an'ny CEGEP tamin'ny milina mpanonta Commodore 64 aho @tremblay96
Efa zokiny daholo isika amin'ny hafa ankoatra antsika
Farany i Lionel no mihevitra fa ny mafana fo indrindra amin'ny mpandray anjaran'ity tsiahy ity dia i Anna Gueye ato amin'ny Global Voices ihany:
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ny mahavita betsaka indrindra amin'ity taranja #jesuisvieux #jesuisvieille ity manerantany dia i @AnnaGueye